Yan Aung: ချစ်သူမရှိတဲ့မြို့...
အိပ်မရညက တရိပ်ရိပ်နဲ့ သူ့ပေါ်ကို ပြိုကျနေတယ်.
မွန်းကြပ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေက ရင်ထဲကနေ ဗလောင်ဗဆူနဲ့ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြလေရဲ့.
“မင်းဘယ်မှာလဲ..” ဆိုတဲ့ အဖြေမထွက်တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့အတူ ဘ၀ငရဲခန်းပြဇာတ်ကို ခုတော့ ကိုယ်တိုင်ကပြနေတတ်ခဲ့ပြီ.
အိပ်ရာပေါ်ပက်လက်အိပ်နေလျက်က ဘေးတိုက်ကိုစောင်း၊ ဘေးတိုက်လှဲနေရာက မှောက်လျက်ပုံပြောင်း၊ မှောက်လျက်အိပ်မရတာနဲ့ ငုတ်တုတ်ထထိုင်၊ ထိုင်ရတာကို စ်ိတ်မရှည်တော့တာနဲ့ အခန်းထဲမှာ လူးလာခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နဲ့ ညတာဟာ တကယ့်ကိုပဲ ရှည်လျားလွန်းနေခဲ့တယ်။
အခန်းထောင့်မှာ ထောင်ထားတဲ့ နီညိုရောင် ဂစ်တာလေးရဲ့ ဂစ်တာကြိုးလေးတွေက လရောင်နဲ့အတူ တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ လက်ခနဲဝင်းခနဲ ဖြစ်သွားတာကို ခံစားချက်မဲ့ စိုက်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်။ တစီစီအော်နေတဲ့ ပုရစ်တစ်ကောင်ရဲ့ ခြေထောက်ချင်းပွတ်ခတ်သံကို ဆက်လက်နားထောင်ဖို့ရန် သည်းမခံနိုင်တော့လို့ အခန်းထောင့်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ လေအေးပေးစက်ကို အဆုံးထိတင်ချပစ်လိုက်တယ်။
ထွက်စမ်းပါစေ. တ၀ူဝူနဲ့ အသံကုန်အောင်.
အေးစမ်းပါစေ.. တဂတ်ဂတ်နဲ့ မေးဖျားတွေ ရိုက်ခတ်လာအောင်.
အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လေအေးပေးစက်ကို ၀ုန်းခနဲ လက်သီးနဲ့ ဆောင့်ထုမိလိုက်သေးတယ်.
အင်း… စိတ်တွေ သိပ်ကျွတ်ဆတ်နေပါပေါ့လား…
အိပ်ရာဘေးနား ပြန်ထိုင်ချလိုက်ပြီး အားသွင်းထားတဲ့ ဖုန်းခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်တော့ အချိန်က မနက် ၃ နာရီ ၄၀ တဲ့.
ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ဖုန်းလေးထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်နေမိတယ်။
ဖုန်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ချောင်းတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တင်းကြပ်စပြုလာတာကို စိတ်က မသိချင်ဘဲ သိနေခဲ့ရတယ်။
အံတစ်ချက် တင်းတင်းကြိတ်လိုက်ရင်း ဖုန်းကို အိပ်ရာပေါ် ပစ်တင်လိုက်တယ်။
အိပ်ရာပေါ်မှာ ဖုန်းလေးက လင်းလျက်သား၊ ဖုန်းလေးထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကလည်း သူ့ကို မထီတထီလေး ကြည့်လျက်သား…
သူ့ဆံပင်တွေကြားထဲ လက်ချောင်းတွေကို ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ခေါင်းကိုမော့လို့ ထိုင်ခုံပေါ်ကို အရုပ်ကြိုးပြတ် ထိုင်ချပစ်လိုက်တယ်…
တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ တတွတ်တွတ် ရေရွတ်နေမိချိန်မှာ တစီစီထွက်ပေါ်နေတဲ့ ပုရစ်သံရော၊ တ၀ူဝူ အော်မြည်နေတဲ့ လေအေးပေးစက်သံတွေရော ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းသွားကြတယ်.….
တကယ်တော့လည်း ရပ်သွားကြတယ်လို့ သူထင်နေတာ သက်သက်ပဲ ဖြစ်မှာပါလေ…
“သူတောင်မှ နေနိုင်သေးတာပဲ. နေပေါ့” ဆိုပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော မခံချင်စိတ်တွေ၊ မာနတွေက စိုးရိမ်စိတ်အဖြစ်ကို တဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်းစပြုလာခဲ့သည်။
သူမတစ်ယောက် နေမှကောင်းရဲ့လား. စကားမပြောဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ. မတွေ့ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ။
နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် စကားပြောခဲ့စဉ်က အကြောင်းအရာလေးတစ်ချို့ကို ပြန်တွေးမိလိုက်သည်။
“ခုပဲ ခရီးက ပြန်ရောက်တယ်. လမ်းမှာ ရင်ကြပ် ပြန်ထနေလို့ ဆေးသောက်ပြီး မနေ့ညက အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာ အခုချိန်ထိပဲ”
အဆင်မှပြေရဲ့လား. တစ်ယောက်တည်း ရင်တွေကြပ်ပြီး အိပ်ရာထဲမှာ ပြုစုသူမဲ့ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေး လဲလျောင်းနေလေမလား. အဆင်မပြေမှုတွေ များလှတဲ့ ရပ်ဝေးမြေခြားမှာ တိုင်ပင်ဖွင့်ဟဖော်မဲ့စွာနဲ့ အားငယ်စိတ်ပျက်နေလေမလား…
သူ့ကိုယ်သူ ပြန်သတိထားမိလိုက်ချိန်မှာ ဖုန်းလေးက သူမဆီကို တတီတီနဲ့ ခေါ်နေခဲ့ပြီ။
တစ်ဖက်မှ ဖုန်းပြန်ဖြေမည့် လက္ခဏာ ရှိဟန်မတူ။
စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပြီး ဖုန်းကို နားဘေးမှ ခွာလိုက်ချိန်တွင် တစ်ဖက်မှ မျှော်လင့်နေခဲ့သော အသံလေးတစ်သံ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အသက်ရှူသံတို့ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားသည်ဟု ထင်လိုက်မိသည်။
ဖုန်းကို နားဘေးနား အလျင်အမြန် ပြန်ကပ်လိုက်ပြီး တင်းကြပ်နေသော စိတ်တို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေလျော့ပစ်လိုက်သည်။
တစ်ဖက်မှ အသံပိုင်ရှင်က အသံကို တတ်နိုင်သလောက် ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းထားပုံဖြင့် ပြန်ဖြေသည်။
“ကောင်းပါတယ်. အခု သူငယ်ချင်းနဲ့ အပြင်ရောက်နေတာ..”
“အင်း. ကိုက မင်းအတွက် စိတ်တွေပူနေတာ. အလုပ်အကိုင်တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေ အဆင်မှ ပြေရဲ့လားလို့လေ…”
တစ်ဖက်မှ ချက်ချင်းပြန်မဖြေသေးဘဲ ဖုန်းခဏကိုင်ထားဖို့ ပြောသည်။ ထို့နောက် သူမနှင့် သူမ၏ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေသည့် အသံလေးက ဖုန်းထဲသို့ တိုးဝင်လာသည်။
“ဆောရီးနော်… သူငယ်ချင်းက လက်သည်းနီ အရောင် ဘာရွေးရမလဲမေးလို့ ပြန်ပြောနေတာ..”
မချိပြုံးတစ်ချက် ပြုံးမိလိုက်သည်ဟု သူထင်လိုက်မိသည်။
“ရပါတယ်ကွာ. အေးဆေးလုပ်နော်. ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တာ မင်းအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ဆောရီးပါ.”
“ဟင့်အင်း အဆင်ပြေပါတယ်. ကိုရော မအိပ်သေးတာလား. အိပ်ရာနိုးလာတာလား.”
ပင့်သက်တစ်ချက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှူရှိုက်လိုက်ရင်းက သူ ပြန်ဖြေဖြစ်သည်။
“အိပ်နေခဲ့တာပါ. ဒါပေမယ့် မင်းကို သိပ်သတိရလာလို့ ပြီးတော့ ဘာတွေများဖြစ်နေလဲဆိုပြီး စိတ်လည်း အရမ်းပူလာလို့ ဖုန်းခေါ်လိုက်မိတာ..”
နှစ်ဦးသားကြား ဆက်ရန်စကားမရှိတော့သလို ခေတ္တနှုတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။
အတန်ကြာမှ သူမက ဆက်ပြောသည်။
“ဒါဆိုလည်း ပြန်အိပ်လိုက်တော့လေ. နော်. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ.”
အောက်နှုတ်ခမ်းကို ခပ်တင်းတင်း ဖိကိုက်ထားရင်းက သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ခပ်မျှင်းမျှင်းလေး ချလိုက်မိသည်။
“ကောင်းပါပြီ ကောင်မလေးရယ်… မင်းလည်း ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်…”
တစ်ဖက်မှ ဖုန်းချသွားချိန်တွင် ကြာမြင့်ချိန်ကို သူ ကြည့်လိုက်တော့ တကယ့်ကို ၂ မိနစ်တည်းရယ်..
တစ်ချိန်က တစ်ညလုံး ဖုန်းတွေပြောခဲ့စဉ်က သူနဲ့ကိုယ်အကြား ပြောစရာစကားပေါင်းများစွာ ပြော၍ပင် ကုန်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ထင်ခဲ့မိသည်။
အခုတော့ ၂ မိနစ်ကိုတောင် အနိုင်နိုင် ဆက်သွယ်ယူလိုက်ရသည်။
ဖုန်းလေးကို စားပွဲပေါ် ပြန်တင်လိုက်ရင်းက အခန်းထောင့်တွင် ထားသည့် ရေကရားမှ ရေကို ငှဲ့သောက်လိုက်သည်။
ထိုင်ခုံဖက်သို့ ပြန်လာပြီး အမှောင်ထဲတွင် ခေတ္တ ထိုင်နေလိုက်သည်။
သူမဖက်မှ ဖုန်းချသွားခဲ့သော်လည်း သူ့ဖက်မှ ပြောစရာလေးတွေက ရင်ထဲတွင် အပြည့်ကျန်နေခဲ့သေးသည်။
ဖုန်းကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီး Voice Memo Application လေးကို ဖွင့်လိုက်သည်။
မျက်စိအစုံကို မှိတ်လိုက်သည်။ အသက်ကို တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်း ရှုသွင်းလိုက်ပြီး Voice Memo Application လေးပေါ်မှ Record ဆိုသည့် ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်သည်။
သူပြောချင်သည့် စကားများကို သူမကိုယ်တိုင် အနားတွင် ရှိနေသည့်အလား ခံစားလျက် တစ်လုံးချင်း ပြောသွားလိုက်သည်။
ထို့နောက် Share ခလုတ်လေးမှ တစ်ဆင့် သူမထံသို့ အီးမေးလ်အဖြစ် ပို့လိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင် အနည်းငယ် ကျေနပ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
အိပ်ရာပေါ်သို့ ပြန်တက်ပြီး မျက်စိကို စုံမှိတ်လျက် အိပ်ပျော်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်သည်။
၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်ထိ အိပ်မရသည်နှင့် ကွန်ပျူတာကို ပြန်ဖွင့်ရင်း စာတစ်စောင်ကို ခပ်သွက်သွက်ရိုက်လိုက်သည်။
ညနေက ငယ့်အသံလေးကြားရတဲ့အတွက်ရော၊ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ လျှောက်လည်နေတာကို သိရတဲ့အတွက်ရော ကိုလေးဝမ်းသာပါတယ်.
ဖုန်းချပြီးသွားတော့ ငယ့်ကို စကားဆက်ပြောချင်စိတ် ရှိနေတာနဲ့ Audio File လေးတစ်ခု ကို ထပ်ပို့လိုက်သေးတယ်.
ငယ်လေး နားထောင်ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိပါဘူး.
ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းလည်း ငယ်လေးအဆင်ပြေပါစေ၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေပါစေလို့ ကိုလေး အမြဲ ဆုတောင်းပေးနေဆဲပါပဲ..
အစစအရာရာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ငယ်လေးရေ…
ကျန်းမာရေးလည်း အထူး ဂရုစိုက်ပါ…
တစ်ချိန်က ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိလိုက်ပြီး အင်တာနက်ထဲတွင် အပြေးအလွှား ပြန်ရှာမိလိုက်သည်။
စကားလုံးများကို တစ်လုံးချင်း အသံထွက်ဖတ်ရင်းက သူ့ရင်ဘတ်တွေ နာကျင်အောင့်တက်လာသည်ကို ခံစားနေမိခဲ့သည်။
နောက်တစ်ရာသီ မပြောင်းပါစေနဲ့လို့တောင် ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတယ်
မင်းရှိတဲ့မိုးကလည်း မရိုးနိုင်တဲ့ တိမ်ရိပ်တွေအောက်
မစိုစေတဲ့ မိုးစက်တွေနဲ့ ခပ်တိတ်တိတ် စွေခဲ့ဖူးရဲ့.
လေပြည်ညှင်းလေး ခပ်ဖွဖွနဲ့ အေးမြသာယာခဲ့လိုက်တာကွယ်..
ဆောင်းဆိုတာ မပြောင်းမလဲ အေးခဲတတ်မှန်း
မိုးဆိုတာ ထစ်ချုန်းလျှပ်ရောင်နဲ့ ခပ်မှောင်မှောင် ရွာတတ်မှန်း
နွေဆိုတာ ဥဩကလွဲလို့ ပူလောင်ဆင်းရဲခြင်းတွေသာ ရှိတတ်မှန်း
ကိုယ် တပင်တပန်း နားလည်ခဲ့ရပြီ…
ထာဝရ မပေးနိုင်တဲ့ ရာသီတွေကို
(ဘာလို့များ) ခဏယာယီ လာပေးခဲ့ရတာလဲကွယ်..
ဥဩသံတွေလည်းကြား… နားတွေလည်း ခါးလို့..
ခုတော့လည်း ချစ်သူမရှိတဲ့မြို့လေးမှာ အထီးကျန်ရာသီတွေကို တနင့်တပိုးသယ်ဆောင်ရင်း သူ ခရီးဆက်နေတတ်ခဲ့ပြီ…
စက်တင်ဘာ (၁၆)၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ။
* "မင်းပေးတဲ့ရာသီ" <ရွှေပြည်သူ>
ဒါကြောင့်ပြောတာနေမှာ ရင်မခုန်တော့ဘူး လွမ်းပဲ လွမ်းတက်တော့တယ်လို့... :)
အသံသွင်းဖိုင်လေးနားထောင်ချင်တယ် ၊ ဘာပြောသွားလဲလို့ပါ.။
ချစ်သူ ရှိတဲ့ မြို့ကို အမြန်ဆုံး ပြန်ရောက်ပါစေ.. :)
အဲဒီစိတ်ပင်ပန်းခွင့်လေးကိုပဲ တန်ဖိုးထားဖြစ်နေတယ် ဟုတ်...။ သေချာတွေးကြည့်ရင် မေ့ပစ်ရမှာကိုပဲနှမြောလိမ့်မယ်..။
စကားတွေ အများကြီးကို အဆီးအတားမရှိ၊ စကားလုံး တွေကို ဂရုတစိုက် ရွေးနေစရာမလိုဘဲ ပေါ့ပါးလတ်ဆတ်စွာ ကရားရေလွှတ် ပြောနေကြတဲ့ ဘဝကနေ အင်မတန် ကြီးမားလေးလံတဲ့ ဖိစီးမှုကြီး တစ်ခုအောက်မှာ ထိန်းချုပ်ပြီး ပင်ပန်းကြီးစွာ ပြောရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်သွားခဲ့တာဟာ ကြေကွဲစရာ ကောင်းလှတယ် ဆိုတာထက် အများကြီး ပိုမှာပါ...၊
ချစ်သူမရှိတဲ့နောက်တော့ မြို့ကလေးမှာ လွမ်းဆွတ်ခြင်း တွေပဲ တဖြိုင်ဖြိုင် ရွာနေခဲ့တော့မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ...။
(Btw..ကိုရန်ရဲ့ ပို့စ်အသစ်တွေ ကျနော့် Blogroll မှာ အလိုအလျောက် တက်မလာတော့ ပြန်ဘူးဗျ၊ သတိရ စိတ်နဲ့ ဝင်လာမှပဲ တွေ့ရမယ့် အဖြစ်..)းD
ချစ်သူမရှိတဲ့မြို့မှာ ရှမ်းထမင်းချဉ်စားလိုက် ဂဏန်းတွေစားလိုက်နဲ့ပေါ့နော်(facebook မှာတွေ့လိုက်လို့ ) :D
>အိန်ဂျယ်... ဟုတ်ပါ့... လွမ်းတာပဲကောင်းပါတယ် ငါ့ညီမး)
>လရိပ်အိမ်... မရှိတော့ဘူး. ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ.း)
>သိင်္ဂါကျော်... ကျေးဇူး Sis.
>White... အမှန်ပဲ. ရှတတလေး ခံစားနေရတာကိုက တစ်မျိုးလေးရယ်.း)
>မြသွေးနီ... နင်နေတုန်းပါပဲ Sis. ရေ...
>ညီလင်းသစ်... လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေ ဖြိုင်ဖြိုင်သည်းနေဆဲပဲ ဘရို... သတိရပြီး ၀င်လာအောင် Blogroll ကို ကလိထားတာလေ. အဟတ်
>Rose of Sharon... နာလိုဘူးထင်တယ်. ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်.း)
စာတွေလာဖတ်ပါတယ် ဆရာကိုရန်အောင်ရှင့်။ တကယ်တော့ ပိုစ့်အသစ်လာမျှော်တာပါ။ အသစ်မရှိတော့ အဟောင်းတွေပဲ ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်။ စာအသစ်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ....း)